संवैधानिक परिषद् सदस्य नियुक्तिमा भ्रष्टाचार मुद्दा खेपिरहेकैलाई ल्याएपछि विवाद
Thursday, 22 September 2011 10:20	नागरिक
काठमाडौं, असोज ५ (नागरिक)- प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसहितमा नियुक्ति दिलाउने संवैधानिक परिषद्‍मा भ्रष्टाचारकै मुद्दा खेपिरहेका मन्त्री जयप्रकाश गुप्तालाई सदस्य बनाएपछि विवाद उब्जिएको छ।
आयोगमा मंगलबार 'भ्रष्टाचारीलाई किरा परोस्' लेखिएको टिसर्ट लगाएर फोटो खिचाएपछि सचिवहरूले प्रधानमन्त्रीको उक्त निर्णयप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे।
'प्रधानमन्त्रीले लगाएको देखेर हामीले पनि लगायौं,' एक सचिवले बुधबार नागरिकसँग भने, 'तर उहाँले बाइस मन्त्रीमध्येबाट भ्रष्टाचारको मुद्दा खेपिरहेकैलाई अख्तियार प्रमुख छान्ने ठाउँमा ल्याउनुभयो।'
स्रोतका अनुसार अख्तियारको चियापान कार्यक्रमपछि केही सचिवले कायममुकायम प्रमुख भगवतीकुमार काफ्लेसँग गुप्ताको नियुक्तिबारे गुनासो गरेका थिए।
'अख्तियारले भ्रष्टाचारी भनेकै मन्त्रीलाई किन प्रधानमन्त्रीले नियुक्त गर्नुपरेको?' काफ्लेसँग गरेको गुनासो उद्धृत गर्दै ती सचिवले भने, 'तपाईंले प्रधानमन्त्रीसँग कुरा राख्नुपर्‍यो।'
अख्तियारका अधिकारीहरूले प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार समूहका सदस्यसँग गुप्ताको नियुक्तिबाट उत्पन्न विवादबारे जानकारी गराएको स्रोतले बतायो।
गुप्ताले सार्वजनिक ओहोदा दुरुपयोग गरी अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको भनी अख्तियारले दायर गरेको मुद्दाको सुनुवाइ सर्वोच्चमा मंगलबारबाट सुरु भएको छ। प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार र पटकपटक मन्त्री रहँदा भ्रष्टाचार गरेको भनी अख्तियारले २०५९ मा उनीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। विशेषले गुप्तालाई सफाइ दियो। फैसला चित्त नबुझेपछि अख्तियार सर्वोच्च गएको हो।
प्रधानमन्त्रीले तीन मन्त्रीलाई संवैधानिक परिषद्मा नियुक्त गर्न पाउँछन्। भट्टराईले केही दिनअघि उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, सञ्चारमन्त्री गुप्ता र ऊर्जामन्त्री पोष्टबहादुर बोगटीलाई परिषद्मा ल्याएका थिए। प्रशस्त रोजाइ हुँदाहुँदै गुप्तालाई नै छानेर प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सुशासनको अभियान कमजोर पारेको सचिवहरूको टिप्पणी छ।
गुप्ताले भने आफ्नो नियुक्ति विधिसम्मत भएको दाबी गरेका छन्। विशेष अदालतमा मुद्दा जितिसकेपछि अख्तियार पुनरावेदन गएकाले आफ्नो नियुक्तिमा कुनै रोकतोक नहुने उनको जिकिर छ।
'म निर्वाचन लड्न योग्य हुने, सभासद् हुन योग्य हुने, मन्त्री हुन योग्य हुने, तर संवैधानिक परिषद्मा बस्न किन नमिल्ने?' गुप्ताले भने, 'संविधानले मलाई जुनसकै कमिटीमा बस्न छेकेको छैन।'
आफूले अरूजस्तो 'हदम्याद' लगायत प्राविधिक कारणले विशेषबाट सफाइ पाएको नभई मुद्दै जितेको उनले बताए।
सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन रहेकैबेला तीन वर्षअघि पुष्पकमल दाहालको पालामा पनि गुप्ता संवैधानिक परिषद् सदस्य थिए। त्यतिबेला तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझीको सिफारिससमेत आफूहरूले गरेको स्मरण गराउँदै उनले भने, 'त्यतिबेला संवैधानिक परिषद्मा बस्न हुने, अहिले किन नहुने?'
मुद्दा टुंगो नलाग्दासम्म नैतिक रूपमा परिषद्मा बस्न सुहाउँदैन भन्नेहरूको तर्क गुप्तालाई मान्य छैन। 'अदालतबाट अन्तिम सजायँ पाइसकेका चिरञ्जिवी वाग्ले चुनाव लड्न मिल्थ्यो कि मिल्दैनथ्यो भनी कोही बोल्दैन,' गुप्ताले भने, 'मेरिटमै छिरेर विशेषबाट सफाइ पाएको मविरुद्ध किन सबै सधैं पछि लाग्छन्?'